Ø Ciidamada Itoobiya oo wiil yar toogasho ku dilay.
Ø Waftigii JWXO oo kulan la yeeshay Jaalliyadda Ogaadeenya ee Ohio.
Ø Dood Cilmiyeed ku saabsan Xoojinta Halganka ay ka wado JWXO dhulka Ogaadeeniya oo lagu qabtay Toronto.
Ø QM oo ku adkaysatay in bishan la jeexayo xadka Itoobiya iyo Eritereya
Ø Ururka macalimiinta Itoobiya oo laga horjoogsaday banaanbax ay isuqabanqaabinayeen.
Ø Waraysi aanu la yeelanay Dr. Cibaado Xirsi mahad izo suugaan halgameed.
Ciidamada Itoobiya oo wiil zar toogasho ku dilay.
War naga soo gaadhay Caasimada Ogadenia ee Godey ayaa xaqiijinaya in magaalada Dhanaan lagu dilay wiil yar oo xerow ka ahaa magaaladaas oo cilmiga diiniga ah ka baran jiray halkaas. Wiilkaas oo ay dileen ciidamada wayaanaha ee ka howl gala magaalada Dhanaan ayaa waxay ku eedeeyeeyn wiilkaas inuu u shaqeeyo ciidanka wadaniga xoraynta Ogadenia CWXO. Wiilkaas wuxuu ku dhintay xerada ciidanka ee magaalada Dhanaan kadib markuu xidhnaa in mudo ah. Ciidamada Itoobiya ayaa kadibna markuu dhintay wiilkaas ku soo war galiyay dadkii qaraabadiisa ahaa in ay meedkiisa aastaan. wiilkaas oo la odhan jiray Wacdi Sheekh Maxamed Aw-kilaas ayay dadiisu ahay 22 jir.
Sida uu noo soo tabiyay wariyaha Radio Xoriyo ee Gobolka Qoraxay waxay 05.10.03 ciidamada cadawga Itoobiya waxay ku xidh xidheen meelo badan oo Ogadenya kamid ah dad badan oo rayad ah wax dambi ah na aan galabsanin waxaana ka mid ah dadkan oo ay ku xidh xidheen magaalada Shaygoosh.
1-Kaad Cabdulaahi Dhicis.
2-Cabdi-wahaab Mohamed Cismaan.
3-Noor Sheekh Xassan.
4-Cabdulaahi Mohamed Ibraahin.
5-Abshir Cabdi-noor Cismaan.
6-Mustafe Khaliif Qorane.
7-Nooro Shafeec Xassan, oo xabsiga ku umushay, kadib markii jidhdil fool xun loo geystay.
7/10/03, Magaalada Birqod waxaa lagu xidh xidhay dad shacab ah oo aan waxba kalabsanin oo ay kamid yihiin:
1- Faadumo Mohamed Cabdi.
2- Saynabo Mohamed Cabdi.
3- Ahmed Xassan Carab.
4- Cabdi Cabdulaahi Noor.
5- Cabdi Cabdulaahi Muumin iyo 3/caruur ah uu dhalay.
6- Nimco Maxamuud Cabdi
8/10/03, Tuulada Gudhis waxaa lagu xidh xidhay dadkan kala ah
1- Shekh Ahmed Yuusuf.
2- Indho-biraale Muxumad Dahir.
3- Fatxi Cismaan Shekh.
4- Weli Amir Garaas.
5- Xassan Ciid Garaas.
6- Macallin Faarah Budul Digaale.
7- Dhaqane Mullaax.
Sida oo kale Tuulada war-gaadsan waxaa xabsiyada loo taxaabay dadkan kala ah.
1- Xussein Cabdul-qaadir.
2- Cabdi Faacuul Cali.
3- Ahmed Deeq Faarah.
4- Cabdi Macallin Ismacil.
5- Fadumo Aden Badal.
6- Sareedo Aw Badal.
7- Xaliimo Xassan Mohamed.
8- Xaliimo Mohamed cumar.
9- Sacdo Sh. Ahmed, oo Umul ah.
sida uu wariyuhu noo soo tabiyay dadkaas ayaan loo haynin wax sabab ah oo xabsiyada loogu guray balse mar uu waraystay wariyuhu dad ku sugnaa magaalada Shaygoosh waxay u sheegeen in ciidamada Itoobiya ay dadkaas ku tuhunsan yihiin in ay taageero u hayaan Jabhada Xoreeynta Ogaadenya oo dagaal hubaysan kaga soo horjeeda Xukuumada Itoobiya.
Waftigii JWXO oo kulan la yeeshay Jaalliyadda Ogaadeenya ee Ohio.
Oktoober 11keedii 2003 ayaa lagu qabtay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Maraykanka shir balaadhan oo ay soo qabanqaabiyeen Jaalliyadda Ogaadenya iyo hawlwadeenada JWXO ee gobolada Bariga Maraykanka. Shirkaas waxaa ka soo qaybgalay wafdigii uu hoggaaminayey la taliyaha Madaxwaynaha JWXO General Abdullahi Mukhtaar, dadwayne ka kala socday gobolada iyo magaalooyinka Atlanta, Indiana, Kentucky iyo marti sharaf kale.
Shirkani wuxuu ahaa qayb ka mid ah hawlaha abaabulka iyo xogwaranka isugu jira ee ay waddo Jabhadda Wadaniga Xoraynta Ogaadeenya. Shirkaas waxaa lagu furay heestii calanka ee dalka Ogaadenya.
Waxaa halkaas ka hadlay La taliyaha Madaxwaynaha General Abdullahi Mukhtaar iyo guddoomiyaha hogaanka Dhaqaalaha JWXO Eng Salaahdiin Macow. Labada masuulba, waxay si aad ah uga warameen xaaladda uu halganku marayo, waxqabadka iyo guulaha jabahadda iyo waliba waajibka shacbiga guud ahaantiisa ka saaran halganka loogu jiro madax banaanida.
Waxaa iyaguna halkaas ka hadlay xubno ka mid ah dadwaynihii ka soo qaybgalay shirkaas oo hadallo talo iyo taageero isugu jira ka soo jeediyey goobtaas. Mas’uuliyiintu waxay kaloo dhagaysteen wixii dhaliil ama sixitaan u baahan ee loo soo jeediyay Jabhadda. Goobtaas waxaa heeso iyo suugaan qiiro galisay dadwaynaha ku soo bandhigay xubno ka mid ah hobolada Waaberi. Ugu dambayntii waxay dadwaynihii halkaas ka soo qaybgalay balan qaadeen inay taageerayaan halganka xaq u dirirka ah ee lagu raadinayo aayo ka talinta shacbiga Soomliyeed ee Ogaadeenya. Wafdigu inta ay joogaan gobolkan waxay shirar gaar-gaar ah la yeelan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada si looga wada hadlo kaalinta ay qayb walba ka qaadan karto halganka.
Dood Cilmiyeed ku saabsan Xoojinta Halganka ay ka wado JWXO dhulka Ogaadeeniya oo lagu qabtay Toronto.
Toronto (ONA) October 13, 2003 Waxaa shir aad loo soo abaabulay lagu qabtay magaaladda Toronto ee dalka Kanada. Shirkaas waxaa soo qabanqaabiyey maamulka JWXO ee magaaladda Toronto. Shirkaas waxaa ka soo qayb galay Madaxda JWXO ee Kanada, culuma awdiinka, odayaasha, indeergaradka, haweenka iyo dhalinyarada kunool magaalooyinka Toronto iyo Ottawa. Ujeedada shirka laga lahaa ayaa ahayd mid lagaga doodayey sidii loo xoojin laahaa taageereda la siiyo JWXO iyo sidii loo heli lahaa figradaha dadwaynaha.
Waxaa shirkaas furay gudoomiyaha unuga JWXO Mukhtaar oo ku soo dhaweeyey Wakiilka kanada u fadhiya JWXO Farax Cismaan. Wakiilka wuxuu ka waramay xaalada halgan ee ay JWXO kula jirto Gumaysiga Itoobiya iyo sida uu u sii xoogaysanayo halganka ay wado JWXO malinba maalinta ka danbaysa, wuxuuna ka qaybgalayaashii shirka ka codsaday in ay halmeel ooga soo wada jeestaan gumaystaha aan naxariista lahayn ee Itoobiya. Sidoo kale waxaa qudbad aad loo jeclaystay ka jeediyey shirka gudoomiyaha abaabulka iyo kicinta mudane Mohamed Qamaan oo ka waramay sida wanaagsan oo ay ooga qayb qaataan taageerida halganka dadweynaha kunool Toronto iyo agagaarkeeda, wuxuu kaloo ka waramay sida ay u wadaan halganka guud ahaan gaar ahana magaalada Toronto, wuxuuna u mahadceliyey dadweynaha reer Toronto sida wanaagasan eey uga qaybqaataan xoreeynta dhulkooda hooyo.
Qudbadaha madaxda kadib waxaa furmay figrad isdhafsi iyo talo-bixino ay is waydaarsanayaan dadweynihii ka soo qaybgalay shirka waxaana gabagabadii la isku raacay in halmeel looga soo wada jeesto gumaystaha Itoobiya, lana xoojiyo taageerada la siiyo JWXO. Waxaa kalo la sameyey gudi isku soo habeeya figradaha iyo talooyinka la isla gartay in ay waxtar u leeyihiin halganka, sidoo kale waxaa la isku raacay in laqabto shir kale dhamaadka bisha December si loo fuliyo go'aamadii la isla gaadhay.
Sida aan kasoo xiganay WWO, Xadka uu muranka wayni ka taagan yahay ee u dhexeeya dalalka Eritereya iyo Itoobiya ayaa la astayn doonaa bishan oktober dhexdeeda, iyadoo uu waliba muran ba, ani ka taagan yahay go, aankii ka soo baxay Ergadii ay Qaramada Midoobey u saartay khilaafka xuduudda ee labadaas dal, sidaas waxaa khamiistii sheegay masuul sare oo ka tirsan Qaramada Midoobey.
Itoobiya ayaa marar badan ku gacan saydhay go, aanka Ergada EEBC, oo magaalada lagu muransan yahay ee Bademe siiyay dalka Eritereya. Bishii horana Meles Zenawe ayaa warqad u diray Qaramada Midoobey, taasoo uu ku codsaday in mar kale dib loogu noqdo arrinta soohdinta ay ku muransan yihiin dalkiisa iyo Eritereya, wuxuuna sheegay in Itoobiya ayna marna aqbalaynin go’aanka Ergada EEBC ee Eritereya siinaya magaalada Bademe.
Ururka macalimiinta Itoobiya oo laga horjoogsaday banaanbax ay isuqabanqaabinayeen.
Sida aanu ka soo xiganay wakaalada wararka Ogaadeenya Ururka macalimiinta Itoobiya ayaa laga horjoogsaday banaanbax ay u soo mareen shuruudihii u sharcigu dhigayay, waxayna ka diiwaan galiyeen banaanbaxaas booliska , maxkamadaha iyo hayadaha ku shaqo leh.
Waxaase saacaduu dhici lahaa looga hor joogsaday si xoog iyo amar ku taaglayn ah. Waxaana is hor taagay cutubyo ka tirsan ciidanka Booliska iyo nabad sugida Meles Zenawi oo sitay amar ka sareeya Sharciga wadanka. Sida u todobaadkii hore soo sheegay wariyaha ONA ee magaalda A.A waxay macalimiinti mudo ka badan bil ku jireen qabanqaabada banaan baxaas, kaas oo ay rabeen in ay ku soo gudbiyaan dhibaatooyin ay ka mid ahaayeen, hoos u dhaca waxbarashada iyo duudsiga xuquuqda Macalimiinta oo mar walba lagu xad gudbo.